Uhulumeni omusha waseZimbabwe 'uzimisele ngokuhlonipha uMugabe' | isiZulu
Uhulumeni omusha waseZimbabwe 'uzimisele ngokuhlonipha uMugabe'
UZodwa Wabantu uyesaba ukuya eZim
Umile umsebenzi wokulungiswa komuzi wendodakazi kaMugabe
Harare - Lowo owayengumengameli waseZimbabwe uRobert Mugabe, 93, owakhishwa esikhundleni ngenyanga eyedlule, uhambele eSingapore ukuyohlolwa isimo sempilo, kusho lowo owayengumkhulumeli wakhe ngoLwesine.
UMugabe nonkosikazi wakhe uGrace abakaze babonakale emphakathini kusukela lo mholi aphoqwa ukuba ashenxe emandleni ngemuva kokuthi umbutho wempi wathatha amandla oMbuso, kwaphela uMbuso kaMugabe weminyaka engu-37.
"UseSingapore sikhulua nje. Kuyingxenye yesivumelwano sababengomengameli ukuba bahambele phesheya kwezilwandle. UMugabe ukujwayele ukuya eSingapore ukuyohlangana nodokotela bakhe," kusho uGeorge Charamba etshela i-AFP.
UCharamba, osekhulumela uMengameli Emmerson Mnangagwa manje, uthe uhulumeni omusha uzimisele ngokutshengisa ukuhlonipha uMugabe.
"Asikho isidingo sokumhlambalaza," esho.
OLUNYE UDABA: Unqatshelwe ibheyili umfundisi owathi uMugabe uzoshona
"Inhloso kwakuwukumukhulula emaketangwini eyamhlabe ngobhongwana. Lokho kwenzelwa ukuthi kuqinisekiswe ukuthi amagalelo akhe ahlale eqhakazile."
Umbutho wezempi wangenelela ngomhlaka-4 Novemba waphendlela uMnangagwa indlela ngemuva kokuthi uGrace Mugabe, 52, kwakucaca ukuthi nguye ozothatha amandla oMbuso.
UMugabe, owaphatha iZimbabwe kusukela ithola uzimelegeqe ngo-1980, usolwa ngokuhola ngesandla sensimbi kanye nokucekela phansi umnotho wezwe.
Kule minyaka eyedlule uhlaselwe ukugula kanti kusolakala ukuthi unomdlavuza. Kanti sekukaningi ehambela amazwe aphesheya kwezilwandle ukuyothola usizo lwezempilo.
UMnangagwa wayengomunye wabantu ababesondelene kakhulu noMugabe njengoba sekunguye ongene esikhundleni sokuhola iZanu-PF nezwe.